Saffron monkfish leh cawsduur | Bezzia
Saffron monkfish oo leh maraqa
Maanta waxaan kugu dhiirigelinaynaa Bezzia inaad diyaariso a cunto kalluun aad u fudud oo ku habboon dabbaaldegyada mustaqbalka: Saffron monkfish oo leh prawns. Cunto aad sidoo kale ku dari karto qaar ka mid ah clams ama mossels si uu maqsinku u sii faafo.
El saffron monkfish oo leh maraqa Ma aha oo kaliya cunto karinta fudud, laakiin sidoo kale mid degdeg ah, aad u dhakhso badan! Kuuma qaadan doonto in ka badan 20 daqiiqo inaad diyaariso, taas oo kuu ogolaan doonta inaad u fiirsato arrimaha kale inta lagu jiro subaxda. Miyaadan bilaabin inaad jeceshahay?
Waxaad ku samayn kartaa cuntadan monkfish laakiin sidoo kale kuwa kale kalluunka sida hake, si fudud u hagaajinta waqtiyada. Bezzia waxaan ka helnaa bedel wanaagsan markaan marti ku leenahay. Dhab ahaantii, markii aan ogaanay in aan ku qasbanahay in aan sawirno si aan u muujinno cunto karinta, martidayadu waxay horey u cuneen kala badh.
8 jilicsan oo kalluunka monkfish
20 baradho ah, diiray
1/2 koob oo khamri ah
2 koob oo maraq kalluun ah (waxaad samayn kartaa mid leh madaxa monkfish iyo qolof prawn ah)
Kuleyli saliidda digsi hoose iyo toonta toonta hal daqiiqad
Marka uu bilaabo inuu midab yeesho, ku dar burka oo karso hal daqiiqo markaad isku qaseyso.
Kadib ku dar khamriga cad oo ha yaraado dhowr daqiiqo.
Kadib maraqa ku shub kalluunka iyo saffron. Isku qas oo kari dhowr daqiiqo.
Sidaas, ku dar kalluunka monkfish oo cusbo leh dhinaca maqaarka kor u kaca oo kari afar daqiiqo, walaaqaya digsiga mar mar.
Afar daqiiqo ka dib, u rog jilicsanaanta rapa iyo cawska ku darso. Isku kari ilaa 2-3 daqiiqadood oo kale, adigoo dhaqaajiya saxarada sidii adigoo diyaarinaaya cod al pilp.
Demi kulaylka oo u adeeg buuriga saffron-ka oo leh cawsyo kulul.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Pescado » Saffron monkfish oo leh maraqa
Furayaasha qoto-dheeraynta cilaaqaadka
4 podcasts oo ku riyaaqay caannimada 2021, soo hel!